मेरी अामा र मेराे उत्सुकता – Enayanepal.com
मेरी अामा र मेराे उत्सुकता
२०७४, १३ बैशाख बुधबार मा प्रकाशित
आमा म तिम्रो महानताको कुनै बयान गर्न सक्दिन । मैले तिम्रो दया, माया र महानताको चर्चा गरँे भने सबैले हाँसोमा उडाउँने छन । मलाई थाहा छैन तिमी को हौ ? कुन शक्ति हौ ? कसरी बुझाैँ तिमीलाई, तिम्रो परिभाषा जहाँ खोज्छु फरक पाउँछु तर पनि मेरो चित्त बुझ्ने परिभाषा कहिँ भेटाउँन सकेकि छैन ।
पक्कै पनि तिमी अरुभन्दा फरक छौँ । यति मात्र थाहा छ । तिमी के हौ ? यो संसारलाई हराबरा बनाउने सुखमय बनाउने, ममतामय बनाउने । त्यो पनि थाहा छैन । यो ब्रहामण्डलाई एउटै समालेर राख्न सक्ने कुन शक्ति छ ? अनि कती छ यो शक्ति तिमी सँग ? तिमीले यो धर्तिमा कति सन्तान पैदा ग¥यौ त्यसको कुनै यकीन त मलाई थाहा छैन । यो भने पक्कै थाहा छ कि यो धर्ती जसरी चलिरहेको छ सब तिम्रै कारण, तिमै्र परिश्रम र मेहनतले मात्र चलिरहेको छ ।
हरबार, हरप्राणले लुकामारी खेलिरहेका छन मनमा । तर पनि आँट आएन मलाई तिमी सँग प्रश्न गर्ने । सायद तिम्रो उमेरले पनि फरक पा¥यो होला । म आजसम्म लुकाएर राख्न सफल भएँ, अव त सक्दिन आमा मुख फोडेरै बोलि नभन्नु है । तिम्रो र बुवाको सम्बन्ध कसरी जोडियो, आमा म जान्न चाहान्छु, हुन त दुई बिपरित धु्रब बिच आकर्षण भए जस्तै नारी र पुरुष विच आकषर््ाण भएर नै पे्रमको उत्पत्ति भयो । प्रेमलाई परिमार्जित गरेर विवाहको सम्बन्धमा परिणत भयो । विवाहपछि श्रीमान श्रीमती नाममा जिन्दगी चल्यो त्यसमा तिम्रो नयाँ सम्बन्ध नयाँ घर, नयाँ परिवार कसरी चलायौँ ? नयाँ परिवारको चित्त बुझायौ ? घर गोठ, गाई, भैँसी, सासु–ससुरा, नन्द–देवर, समय यस्तै यस्तै सबै नयाँ । तिमीलाई कति समय लाग्यो । यीनीहरुलाई पुराना गराउन । यसैबाट बुझिन्छ तिम्रो महानता ।
तिम्रो बिवाहपछि मेरो बाबासँगको पहिलो सम्बन्ध, एउटै बिस्तरा, त्यो समय तिमी लज्जावति झार झँै लज्जायौ होला, सँगै सुत्ने कुरालाई अस्वीकार गरेर लज्जास्पद बनायौ होला । त्यो त थाहा छैन । कता कता शंका लाग्छ । आफ्नै बानी हेरेर तिम्रो गुण हो याता बाबाको आफुलाई चित्त नबुझेको कुनै कुरालाई स्विकार नगर्ने, यदी यो गुण तिम्रो हो भने तिमीले नै बाबालाई लज्जासपद बनायकि हुनुपर्छ । यसैबाट बुझिन्छ कि तिमी अडिक छौँ ।
तर तिमीले कुन दिन बाबाको प्रस्तावमा स्विकार ग¥यौ या तिमीले नै प्रस्ताव ग¥यौँ । केही छैन म बुझ्छु जे ग¥यौ सहमती मै ग¥यौ । जस्तै श्रीमानको र तिम्रो ओठको मिलन तिम्रो बेलौति जस्ता स्तन र श्रीमानका किम्बुजस्ता स्तनको मिलन यस्ता यस्तै मिलानमा तिम्रो फिलिङस कस्तो रहयो ? ….कस्तो थियो म सोच्नै सक्दिन र म यस्लाई अनुभव गर्ने तरखरमा पनि छैन । मात्र तिम्रो मुखबाट सुन्न मन छ र मेरै दौतरिहरुलाई रे को कथा सुनाउँन मन छ । मेरी आमाले भनेको …….रे ।
तिम्रो पुर्ण शरिर भित्र रहेको घना जङगलको दुलोमा सर्प पस्दा समेत तिमीले यस्लाई ठाउँ दियौ । जति ठुलो दुलो बनाय पनि तिमीलाई स्विकार्य भयो । तिमीलाई अलिकती पनि पिडा भएन । त्यति डुलो घोल बनायर अण्डा पर्दा । कि तिमी निर्जिव माटो जस्तै बनिदियौ । तिमी भित्र अर्को घर बनायर बच्चाको उत्पति भै रहदा ।
तिमी आफैमा के सोचेकि हुन्थयौ ? खै परिवार र समाजले भने तिमीलाई गर्भवति भएको संज्ञा दिएका हुँदा हुन । एउटा बच्चालाई आाफनो शरिर भित्र नौ महिना राखेर अन्तिम्मा उस्लाई पनि शरिरमा साँघुरो भयो होला क्यार । बाहिर निस्कने प्रयास त्यो पनि हुन्छ । तिमीले पनि त्यो बेला बाहिर निकाल्नै खोज्यौ । नौ महिना कोखमा राखेपछि मात्र धर्तिमा ल्याउँने तिम्रो साहस कस्तो ? किन निस्कन खाज्यो त्यो बच्चा ? अनि किन निकाल्न खोज्यौ तिमीले पनि ? सायद तिम्रो शरिर भित्रको घर उस्का लागि सानो भयो होला । या भुकम्प गयर घर भत्कियो होला ।
त्यो घर भत्किदा तिमीलाई कति पिडा भयो ? तिम्रो शरिरबाट कति खोला, नाला भेल बनेर बगे । तिमीले कसरी सहेर आफुलाई समाल्यौँ ? म अनुभव त के कल्पना गरेर सोच्न नि सक्दिन । दुई मिनेटको आन्नदको लागी आफुलाई पाहिला पाहिलामा मारेर संसारलाई हराबरा बनायकि छौँ । तिमीलाई कुन शब्दले बोलाउँ, कुनै शब्द छैन । यस्तै यस्तै प्रश्नाले सताई रह्यो मलाई । म बाध्य भए आज तिमी सामु प्रश्न गर्न ?? गल्ती भए माफ पाउँ । संसार कि आमा तिमी ।